SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
Handifariri muviri wandinawo. (Muenzaniso: “Pose pandinozvitarisa mugirazi ndinoona chimunhu chakafuta, chakashata. Ndakatosvika pakuzviuraya nenzara ndichida kuva nemuviri mutete.”—Serena.)
Ndinogutsikana nemuviri wangu. (Muenzaniso: “Pane zvimwe zvinhu zvaunototi usafarira pachitarisiko chako, asi zvimwe unotofanira kuzvigamuchira sezvazviri. Kupenga kunetseka nezvinhu zvatisingakwanisi kuchinja.”—Natanya.)
Zvinobudiswa paTV nemabhuku. “Vechiduku vanokanganiswa nemifananidzo inoita kuti vafunge kuti kuva nemuviri mutete ndiko kunaka. Izvi zvinoita kuti kana usina muviri wakadaro uzvione sokunge usingabatsiri!”—Kellie.
Zvinoitwa nevabereki. “Ndakaona kuti kana mai vachinyanya kunetseka nezvakaita muviri wavo, kazhinji ndizvo zvichaitawo mwanasikana wavo. Ndizvowo zvinogona kuitika kunanababa nevanakomana vavo.”—Rita.
Kuzvitarisira pasi. “Munhu anonyanya kunetseka nezvakaita muviri wake anogara achibvunza vamwe kuti vari kuona sei muviri wake. Zvinondibhowa kutamba nemunhu akadaro!”—Jeanne.
“Hazvisi zvinhu zvose zvausingafariri zvaunogona kuchinja pauri, saka zvakanaka kudzidza kutozvigamuchira. Kana ukazvigamuchira, vamwe havazombonyanyi kuzvitarisa.”—Rori.
“Ita zvaunokwanisa kuti uve noutano hwakanaka. Kana uri mutano, zvauri ndizvo zvaunofanira kunge uri. Uye kana mumwe munhu akasakufarira nemhaka yezvakaita muviri wako, munhu iyeye anenge asiri shamwari yako chaiyo.”—Olivia.
Kugutsikana. ‘Zviri nani kuti munhu agutsikane nezvaanoona nemaziso ake pane kugutsikana nezvaanofunga. Naizvozvo izvi hazvina maturo, kungodzingirira mhepo bedzi.’—Muparidzi 6:9, Bhaibheri Rinoyera.
“Chiso chedu chinoratidza maonero atinozviita. Kana munhu achigutsikana, vamwe vachazviona uye zvichabva zvaita kuti vamufarire.”—Sarah.
“Chimiro chakanaka chinogona kuita kuti vakawanda vakutarise. Asi unhu hwako hwakanaka ndihwo huchaita kuti vanhu varambe vachifunga nezvako.”—Phylicia.